Internet Download Manager 6.12 Build6Beta Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Internet Download Manager 6.12 Build6လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update လေးထွက်တာတော့ 2ရက်လောက်ရှိသွားပြီ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ အခုမှတင်ဖြစ်တာ...! Firefox နဲ့အတူ Update လေးတွေမြင့်ပြီးသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာ တင်ပပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ...! ( 5.08 MB )
No Response to "Internet Download Manager 6.12 Build6Beta Patch...!"